Izindaba Archives - Amahlubi Nation
Category Archives: Izindaba
IZINKUMBI zesizwe samaHlubi zinikele eNkantolo ePhakeme yaseGauteng, ePitoli ukuyokweseka umholi waso, uMnuz Muziwenkosi Johannes Langalibalele II Radebe ukuze abekwe njengenkosi yesizwe. IKhomishini kaNhlapo yango-2009 yasichitha isicelo samaHlubi sokuthi ubukhosi baso bubekwe njengobusemthethweni. Le khomishini yabekwa ngowayengumengameli wezwe uMnuz Thabo Mbeki ngo-2004 ngenhloso yokuxazulula izingxabano zobukhosi. Imiphumela yemukelwa ngowayengumengameli wezwe uMnuz Jacob Zuma ngo-2010, owabe esememezelaRead More
Posted on May 14, 2020 May 14, 2020 by Elisha
SIMANGALISO NTSHANGASE IMIBIKO yakamuva imkhomba kwelinye lamaqembu aseGoli umgadli weBlack Leopards uMwape Musonda, yize esanenkontileka naleli qembu laseLimpopo. Kusukela eshaye into ecokeme mining imibiko ebilokhu ivela imkhomba nenqwaba yamakilabhu amakhulu, kuwo okuvela iKaizer Cheifs ne-Orlando Pirates kanjalo nompetha bangesizini edlule, iMamelodi Sundowns. Ngokwemibiko esanda kusabalala kwabezindaba kuvele ukuthi uMusonda (29) uzimisele ngokuphendula kwelinye lamaqembu akeRead More
Sekuyezwela kubanikazi bezindlu ezihlala abafundi ezingakhokhelwe
SIMANGALISO NTSHANGASE ABANIKAZI bezindlu ezihlala abafundi bathi Sekuyezwela manje kubo ngenxa yokuvalwa kwezinye izinto ezweni okuholele ekutheni kuvalwe izikole namaNyuvesi, lokho osekubenze basokola kakhulu ngoba izindlu zabo azikhokheliwe kuze kube imanje. UMnuz Rickesh Maharaj weKwaZulu-Natal Student Housing Association (KZNSTHA) uthe njengoba uHulumeni enxuse ukuba kungabi bikho udlame uma kukhona abanezikhalo ngokuthile, unethemba lokuthi nabo bazobhekelelwaRead More
Ufuna ukushiya oweqiwa ijezi kwiDowns
SIMANGALISO NTSHANGASE NJENGOBA iMamelodi Sundowns isezinhlelweni zokusayinisa unozinti omusha ukulungiselela isizini ezayo, sekuvele imibiko yokuthi unozinti wayo oweqiwa ijezi uReyaad Pieterse ufuna ukushiya kwiDowns azitholele elinye iqembu azodlala kulona. Ngokwemibiko yabezindaba evele ngasekuqaleni kwaleli viki kubikwe ukuthi uPieterse (28) uzimisele ngokushiya kuMasandawana azitholele ikhaya elisha anethemba lokunethezeka kulo, athole ijezi osekunesikhathi eside limeqa. “Kuyiqiniso elingenakuphikwaRead More
UMotsoaledi usabisa ngothathela uMnyango WezabaSebenzi izinyathelo zomthetho
SIMANGALISO NTSHANGASE UNGQONGQOSHE WezoMnyango WezaSekhaya u-Aaron Motsoaledi uthi uzothatha izinyathelo zomthetho uma uMnyango WezabaSebenzi ungavumeli abahhovivi amabili aseGauteng ukuba avulwe asebenze. Izolo uMotsoaledi utshele i-Portfolio Committee emahhovisi oMnyango WezaSekhaya ukuthi amahhovisi aseWestern Cape, Mpumalanga naseLimpopo avaliwe evalwa yi-Public Servants Association of South Africa (PSA). I-PSA ikhiphe isitatimende ngoLwesithathu lapho icacise khona ukuthi uMnyango WezaSekhaya awuzangeRead More
Posted on May 4, 2020 May 14, 2020 by Elisha
SIMANGALISO NTSHANGASE UNgqongqoshe wezoLimo, ukuBuyiswa koMhlabanokuThuthukiswa kweZindawo zaseMakhaya, uNkk. ThokoDidiza usecacise kabanzi ngokuthi abalimi abasebancanenabasafufusa bangazifaka kanjani izicelo zoxhaso, oluzosizaekulekeleleni ekutheni bangabhekani nengwadla yokuphelakomkhiqizo wokudla kulezi zinyanga eziyisithupha ezizayo. UNkk. Didiza usebeke imali yoxhaso elinganiselwa ku-1.2 billion wamarandi okuzoxhaswa ngawo abalimi bakuleli, okunamathuba amaningi okuthi baphazamiseke ngenxayomthelela wezinsuku ezingama-21 ze-lockdown edalweukubhebhetheka kwegciwane iCOVID-19. Uveze leziRead More
Posted on May 4, 2020 May 4, 2020 by Elisha
SIMANGALISO NTSHANGASE UMENGAMELI wakuleli uMnuz Cyril Ramaphose usethuleisigaba sesibili onhloso yaso ukulwa nobhubhane lwesifoiCoronavirus, edla lubi selokhu kuqale lo nyaka ngemuvakokubheduka eChina ngoDisemba wanyakenye. UMnuz Ramaphosa enkulumweni yakhe ebilindelwengabombu ayethulele isizwe izolo umemezele isamba sika-R500 billion wamarandi onhloso yaso ukuzamaukuhlangabezana nezidingi zabantu bakuleli, abakhahlamezeke bathikamezeka kakhulu ngenxa yemigomonemithetho eqinile onhloso yayo ukuzama ukulwisananokubhebhetheka kwalo bhobhune.Read More